Indlu yamaplanga enomtsalane yokuphumla - I-Airbnb
Indlu yamaplanga enomtsalane yokuphumla
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
Indlu yeendwendwe eChia, etofotofo, engqongwe ziintaba neendawo ezifanelekileyo zokuphumla okanye zokusebenzela ekhaya (I-intanethi entle). Inegumbi elinebhedi elala abantu ababini, enye inebhedi enye negumbi lokuhlambela elinye. Ukuba unqwenela, ungaya ezintabeni okanye wonwabele igadi.
Yimizuzu embalwa ukusuka kwidolophu yaseChia okanye eCota, iidolophu ezinazo zonke izinto ezinokusetyenziswa kunye nomnyango wokungena kwishiti. (yindawo efanelekileyo yokubaleka eBogotá ungakhange uye kude kube ngoku, yimizuzu eyi-20 emantla)
Ngasemva kwendlu yamaplanga etofotofo kukho igadi yayo enee-blackberries, ii-blueberries, ii-cherries, ii-feijoas, ii-papayliday, ezimfutshane. Le ndawo yindawo ethe cwaka eneendlela zonxweme onokuzibuka
4.94 · Izimvo eziyi-33
Le ngingqi ibalulekile, kwiiblokho ezimbalwa ezikude kukho umnyango omkhulu okhokelela kwiivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela kunye ne-Andrés Carne de Res. Kwelinye icala, yindlela esecaleni kwendlela ehambelana nendawo yokuhlala yemveli kunye nendlela efanelekileyo yokuhamba okanye yokuzilolonga. Ungazama ukunyuka iValvanera
Umbuki zindwendwe ngu- David
Periodista y viajero....
Ungaqhakamshelana nathi efowunini ukuba kukho nantoni na oyifunayo, sidla ngokusondela kuyo nayiphi na imibuzo okanye uncedo olufunayo